Ukubaluleka kokuqulathwe kwi-SEO: Isikhokelo esineenkcukacha nguSemalt
Ungawenza njani umxholo olungiselelwe ienjini yokukhangela
Iiwebhusayithi ezininzi zinqwenela ukudweliswa phakathi kweGoogle TOP 100 iisayithi. Inani lezi webhusayithi lenza inzame zokwandisa iwebhusayithi yabo kwiinjini yokukhangela. Inani elincinci kakhulu labo likuqonda kakuhle ukubaluleka komxholo kwi-SEO.
Ngokwezikhundla ezisezingeni eliphezulu lemibuzo yokukhangela, imixholo yewebhusayithi yakho inokufaniswa ne-injini yemoto yakho. Imoto yakho ayizukuhamba nge-intshi ngaphandle kwe-injini, ngokunjalo newebhusayithi yakho ayizukuhamba phambili ngaphandle komgangatho ofanelekileyo.
Xa umxholo wakho ungowomgangatho ophezulu kunye nezinye iindlela zakho ze-SEO zingaphezulu, akukho xesha, iwebhusayithi yakho iya kuba kwinqanaba eliphezulu lophando. Ukubuyela umva kwimeko enjalo ukuba umxholo kunye neendlela zakho ze-SEO zihlwempuzekile- zingakhokelela kwizohlwayo ezivela kuGoogle. Nje ukuba iwebhusayithi ihlaselwe sisigwebo sikaGoogle, bahlala bekufumanisa kunzima ukufumana kwakhona kuyo.
I-Semalt ijolise ekuncedeni uqonde ixabiso lomxholo kwi-SEO, ukuba ngowuphi umxholo wokwenyani, ungawenza njani umxholo ophucukileyo kwaye konke ongakwenza ukuqinisekisa ukuba umxholo wakho kunye nezicwangciso ze-SEO zisebenza kunye ukukunika indawo phezulu kwophando. imibuzo yenjini.
Makhe sihlolisise umhlaba womxholo kunye ne-SEO.
Kwinqanaba elisisiseko, umxholo lwazi nje lwedijithali (isicatshulwa, umfanekiso, ividiyo, iaudio) kwiwebhusayithi yakho ejolise ekukhanyiseni, ukonwabisa okanye ukwazisa iindwendwe zakho.
Kubaluleke kangakanani ukuba umxholo kwi-SEO?
Ngaphezulu kwe-3.5 yeebhiliyoni zemibuzo yokukhangela yenziwa yonke imihla kuGoogle. Kumzamo wokugcina abasebenzisi babo, uGoogle uqhubeka nokuhlaziya ii-algorithms zayo ukuqinisekisa ukuba bazisa "iziphumo eziluncedo nezichaphazelekayo" ngexesha elifutshane kakhulu.
Iziphumo eziluncedo nezifanelekileyo kulo mxholo zingumxholo wewebhusayithi yonke kwi-intanethi. Babalwa emva kokulandelelana kokusebenziseka kunye nokuhambelana nomsebenzisi owenza uphando.
Oku kubonisa ukuba umxholo wakho kufuneka ubonwe uluncedo nguGoogle kumsebenzisi ngaphambi kokuba wabelwe.
Ukwenzela ukwanda kwexabiso le-SEO lomxholo wakho, kukho izinto ezithile umxholo wakho ekufuneka unazo. Babandakanya:
1. Kufanele ukuba kube luncedo kwaye kufundise: Ukuba unayo iwebhusayithi ishishini lakho, kufuneka ufake indawo, ulwazi loqhakamshelwano, iimveliso / iinkonzo ezinikezelwayo kunye neeyure zomsebenzi. Ukuba unakho, yongeza ibhlog ukugcina abathengi bakho bahlaziywe kutshanje malunga neshishini lakho.
2. Kufanele ukuba ibe yexabiso ngakumbi kwaye iluncedo ngakumbi kunezinye iwebhusayithi kwi-niche efanayo: Ukuba ubhala malunga nokuzinceda, umzekelo, qinisekisa ukuba amanqaku akho anikezela ngolwazi olungcono okanye umbono owahlukileyo kuncedo lokuzinceda kunamawaka mitha amanqaku aphuma mihla le ngesihloko esifanayo.
3. Kuya kufuneka uthembeke: Ukuthembeka kwesiza sakho kungakonyuswa ukuba usebenzisa uphando lwantlandlolo, izikhalazo, kunye nekhonkco lomxholo wesiza sakho. Ibhayografi yombhali, uphononongo kunye nobungqina obuvela kubathengi bokwenyani bokwenyani kuya kuphucula kakhulu ukuthembakala kwakho.
4. Kufanele ukuba ibe kumgangatho ophezulu: Qinisekisa ukuba umxholo okwindawo yakho uhlukile, ngqo ngqo kwinqanaba kunye nomgangatho ophezulu. Kulumkele ukungakhathali konke konke.
5. Kufanele ukuba ibandakanyeke: Yazisa iwebhusayithi yakho ebomini ngokongeza imifanekiso esemgangathweni kunye neevidiyo. Musa ukuvumela iindwendwe zakho ziphazanyiswe kukupela, isiphene okanye iimpazamo eziyinyani. Khusela iintengiso ezininzi kakhulu. Gcina iindwendwe zakho zibandakanyeka ngokuzihlaziya rhoqo. Ungabagcina kwindawo yakho ixesha elide kwiibhokisi zezimvo kunye / okanye kwiwijethi zemidiya yoluntu.
Ungawenza njani umxholo olungiselelwe iiNjini zokuKhangela
Ukwenza umxholo ophucukileyo, kukho amanyathelo ambalwa ekufuneka elandelwe.
Ngaphambi kokudala umxholo
1. Yenza uphando ngegama eliphambili: Kwiziphumo ezilungileyo, uya kufuna ukufumana ukuba yeyiphi na amagama aphambili akhangelwa kakhulu ngabaphulaphuli bakho. Isixhobo sophando lwegama eliphambili esinokuthenjwa njengesiSemalt siya kuba luncedo olukhulu ekwenzeni oku.
2. Khetha isihloko sakho kunye namagama aphambili axhasayo: Kubalulekile ukwenza uphando ngegama eliyintloko kuqala ukuze umxholo wakho wokuphumela ufumaneke kwiinjini zokukhangela. Kuphando lwakho, chonga isihloko esifanelekileyo somxholo wakho. Qinisekisa ukuba ugxile kumagama aphambili emsila. Kulumkele ukhuphiswano lwamagama aphambili kunye nenani elikhulu lokukhangela.
3. Yenza ukuba umgangatho wakho kunye nefomathi yomxholo ukuba ifundeke ngokulula: Indawo ezininzi zilwela ukuba ziqwalaselwe ngundwendwe ngalunye olunayo kwiwebhusayithi yakho. Ke kuya kufuneka wenze konke okusemandleni ukuze uzigcine umhle kumxholo wakho. Enye indlela yokwenza oku kukufometha umxholo wakho ukuze ufundeke ngokulula.
Apha ngezantsi kukho ezinye iingcebiso ezinokuba luncedo kuwe:
a . Hlula umxholo wakho kwii-chunks ezincinci. Isiqendu esikhulu sisoyikisa iindwendwe ezininzi. Kungcono ukuba usebenzise izivakalisi ezimalunga ne-2-3 kumhlathi ngamnye.
b . Kangangoko kunokwenzeka, faka izihlokwana kunye / okanye imifanekiso emva kwawo onke amagama angama-200 ukuya kwangama-200 ukuqhubekeka nokwaphula umxholo wakho.
4. Faka i-backlinks kwisiqulatho sakho: Okona kuyinyaniso indawo yakho, okukhona ikwinqanaba eliphezulu. Xa udibanisa amanye amagama kwiwebhusayithi efanelekileyo nefanelekileyo, iinjini zokukhangela zibona ukuba umxholo wakho uyinyaniso. Kwiziphumo ezilungileyo, yeka amagama kwikhonkco yakho ukuya ku-6 okanye ngaphantsi.
5. Namathela kwisihloko sakho nakwigama eliyintloko ekujolise kulo: Ukuba ufuna ukwenza owona mxholo uluncedo kunye nesihloko sakho, kubaluleke kakhulu ukuba unamathele kwisihloko sakho. Kwakhona sukuzama ukujolisa amagama amaninzi aphambili. Qinisekisa ukuba ujolisa kwisihloko sakho kunye namagama aphambili asixhasayo.
Emva kokudala umxholo wakho
1. Sebenzisa i-URL yakho: Yidilesi yephepha lakho lewebhu ebekwe ngqo kwindawo ephezulu yophando. Indlela eyilwe ngayo i-URL yakho inokuchonga inqanaba lokucofa kwakho. Ukuba i-URL yakho inde kakhulu okanye ikhangeleka ingaqondakali, inokoyika abathengi ekukhangelo kwiwebhusayithi yakho. Kubalulekile ukuba i-URL yakho ifundeke njengoko ucofa-ngaphakathi-amaxabiso achaphazela uhlobo lwakho.
2. Lungisa i-tag yakho yesihloko: Ithegi yesihloko yintloko enokucofa ibonwe ngokuthe ngqo kwi-URL. Umgangatho wethegi yakho yesihloko unokwenza umsebenzisi afune ukucofa indawo yakho okanye ayityeshele. Iimpawu zetayitile ziyanceda kwiinjini zokukhangela ukuba ziqonde ntoni malunga nephepha lakho malunga.
Nazi ezinye zeengcebiso ezinokukunceda ukuba wenze itikiti lakho lesitayile:
a. Yenza ithegi yesihloko ichaze ngokuthe ngqo ukuba umxholo wephepha uthetha ngantoni.
b. Ithegi yesihloko mayibe ngo-60 okanye ngaphantsi.
c. Beka amagama akho okujolisa ekuqaleni.
d. Zama ukungabandakanyi amagama amaninzi aphambili kwisihloko.
3. Lungiselela inkcazo yemeta yakho: Inkcazo yemeta sisicatshulwa esifutshane sesicatshulwa esivela kwiphepha lakho esibonakala phantsi kwe-URL kunye nesihloko setayitile. Umxholo omncinci obonwe kwinkcazo ye-meta yakho uchaphazela nomgangatho wokucofa-kuwo njengoko oko kubonakala apho ngabasebenzisi kuyakucacisa ukuba baya kucofa kwindawo yakho okanye baqhubeke nokuqengqeleka. Nazi ezinye zeengcebiso ezinokukunceda wenze ngcono inkcazo yemeta yakho:
a. Qinisekisa ukuba inkcazo ye-meta ikufutshane kwaye ikujonga ngokubanzi umxholo.
b. Qinisekisa ukuba inkcazo ye-meta iqulethe ngaphantsi kwe-160 leempawu.
c. Beka amagama aphambili achazayo kwinkcazo ye-meta (ziya kubalaseliswa kwiziphumo zophando).
Unokunceda njani uSemalt
Oku konke kunokuvakala kububugcisa kwaye kunokubonakala njengomsebenzi omkhulu. Kungenxa yeso sizathu uSemalt edala isicwangciso sokuzihlaziya esizenzekelayo seshishini lakho. Umxholo wokudala umxholo omkhulu kwindawo yokuqala kukuphucula isikhundla kwiinjini zokukhangela eziya kuthi, zikhokelele kwimpumelelo kwishishini lakho.
I-Semalt ithatha uxinzelelo kuwe kwaye yenza ishishini lakho kwi-intanethi liphumelele.
Banikezela ngeemveliso ezintle kunye neenkonzo zokuqinisekisa ukuba iphepha lakho lewebhu likhulu kakhulu. Oku kubandakanya:
1. I-AutoSEO: I- AutoSEO kaSemalt ithembisa iziphumo ezintle ngaphakathi kwamaxesha amafutshane. Le phakheji ye-SEO ihambisa: ukuphuculwa kokubonakala kwewebhusayithi; ukwenziwa kwekhasi Isakhiwo uphando lwamagama aphambili; kunye neengxelo zewebhu analytics. Cofa apha ukuze uqalise.
2. I-SEO epheleleyo: Oku kubandakanya iseti ephucukileyo yeendlela ze-SEO ezilungiselelwe isiphumo esingcono. I-SEO yeSemalt epheleleyo ihlangula: ukusebenza ngaphakathi; ukulungisa i-webhusayithi; ubhalo lomxholo; Umvuzo Inkxaso kunye nokubonisana. Thatha ithuba le-Semalt ye-SEO epheleleyo apha .
3. Uhlalutyo lwewebhu: Izixhobo zokuhlalutya izixhobo ze-Semalt ziveza eyona ndlela imfutshane kwiGoogle TOP10. Ezi zixhobo zinceda ukukhangela iiwebhusayithi zakho; tyhila ukubonakala kwendawo yakho kwi-intanethi; ukuphonononga iwebhusayithi ekhuphisanayo; chonga iimpazamo ezikwiphepha lokusebenziseka; nokuzisa iingxelo ezibanzi zewebhusayithi kuwe. Ungayifumana ngokwakho ingxelo yakho yasimahla yewebhu .
4. Ukuphuhliswa kweWebhu: Iziphumo zokuqala zibalulekile kwi-intanethi nakwimeko zokwenyani. Umfanekiso okhangayo unceda ukufumana abathengi ngakumbi. Semalt iqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho inomdla kakhulu kwaye inomdla kubathengi bakho. Abaphuhlisi bewebhu bobuchwephesha beSemalt banikezela: uyilo olusebenzayo nolusebenzayo lwewebhu; Isisombululo senkqubo yokulawulwa kokuqukethwe; ukubonakala okwandisiweyo; ukuhlanganiswa kweplagi egudileyo kunye ne-API; Ukunyusa i-E-commerce; Inkxaso kunye nokugcinwa.
5. Ukuveliswa kwevidiyo: I- Asides ehambisa umxholo obhaliweyo kubathengi bayo, uSemalt wenza umxholo wevidiyo omangalisayo ukukugcina ukude kakhulu nokhuphiswano.
Umxholo ngukumkani kwi-injini yokukhangela. Umxholo wakho unakho ukwenza ishishini lakho okanye ukulaphula. Ngokuqonda okuqokelelwe apha, unokwenza ngempumelelo umxholo wokuzibandakanya okanye ungcono ngakumbi, ushiye ezandleni zezona zibalaseleyo kwishishini le-SEO - Semalt.